10-Ka Luuqadood Ee Ugu Faafitaanka Badan Caalamka Iyo Luuqadda Carabida Oo Ka Mid Noqotay Kuwa Ugu Faafitaanka Badan Dunida | FooreNews
Home Barnaamijo 10-Ka Luuqadood Ee Ugu Faafitaanka Badan Caalamka Iyo Luuqadda Carabida Oo Ka Mid Noqotay Kuwa Ugu Faafitaanka Badan Dunida
10-Ka Luuqadood Ee Ugu Faafitaanka Badan Caalamka Iyo Luuqadda Carabida Oo Ka Mid Noqotay Kuwa Ugu Faafitaanka Badan Dunida
FoorenewsOct 26, 2017Barnaamijo, Sheekooyin, wararka0
London, October 26, 2017- (Foore)- Luuqadaha adduunka lagaga hadlaa waxa ay ku kala duwan yihiin xagga fiditaanka iyo sida ay u korayaan tirada dadka ku hadlaa, tirada dadka ku hadla adduunka iyo sidoo kale dalalka adduunka lagaga hadlo. Iyada oo tirada dadka adduunka ku nool lagu qiyaaso wakhtigan in ay dhan yihiin 7.2 Milyaar oo qof sida ay sheegayso warbixintii ugu dambaysay ee sannadkan 2017 laga soo saaray tiro-koobkii ugu dambeeyey ee dadka adduunka ku nool ayaa waxa la sheegaa in dadkaasi adduunka ku nooli ku hadlaan in ka badan 7-kun oo luuqadood haba kala waaweynaadaane. Arrinka haddaba layaabka leh ayaa waxa uu noqday in kala badh boqolkiiba Konton la sheegay in luuqadahaasi adduunka lagaga hadlo ee dhan 7-kun ee luuqadood ay kala badh meeshaba ka baxayaan oo ay dabar go’ayaan, halka kuwo kale oo badani si weyn xawli ugu socdaan faafitaan iyo in ay noqdeen luuqado aad u koraya oo dadka ku hadlaa sii kordhayaan mar walba.
Warbixin laga diyaariyey luuqadaha adduunka lagaga hadlo, kuwa dabar go’aya iyo kuwa ugu faafitaanka badan oo Wargeyska Foore idiinka soo turjumay Telefishanka Sky News ayaa waxa ay tibaaxaysaa in luuqadda Carabidu kaalinta koowaad ka gashay luuqadaha ugu faafitaanka badan adduunka iyada oo dalal badan oo hore aan luuqaddan lagaga hadli jirin ay maanta si xawli leh dadkoodu u baranayaan.
Lixda luuqadood ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysaa u aqoonsan tahay luuqadaha rasmiga ah ee qaramada Midoobay ayaa waxa ay yihiin: Ingiriisida, Isbaanishka, Faransiiska, Ruushka, Carabida iyo Luuqadda Shiinaha ayaa waxa haddana jirta luuqado kale oo si weyn iyaga laftoodu dunida ugu faafaya. Daraasaddii ugu dambaysay ee arrimahan laga diyaariyay waxa ay tibaaxaysaa in 10-ka luuqadood ee adduunka ugu faafitaanka badani kala yihiin sidan soo socota:
1. Luuqadda Ingiriisida: Luuqaddan oo marka horeba loo aqoonsanaa luuqadda koowaad ee adduunka ayaa noqotay luuqadda ugu faafitaanka badan. Waxaana dadka wakhtigan ku hadla lagu qiyaasaa in ka badan 1.8 Milyaar oo qof kuwaasi oo tirada adduunka ka noqonaya 25%.
2. Luuqadda Maandariin ee Shiinaha: Tirada dadka luuqaddan ku hadla waxa lagu qiyaasaa 18.5% tirada dadka adduunka waxaana inta badan lagaga hadlaa kaliya dalka China iyo dadka Shiinayska ah ee ku nool dalalka dalkooda u dhaw gaar ahaan Koonfur Bari Aasiya.
3. Luuqadda Hindiga: Waxa ay noqotay luuqadda saddexaad ee ugu faafitaanka badan dunida waxaana ku hadla dad lagu qiyaasay 11.5 tirada dadka adduunka. Waana luuqadda rasmiga ah ee dalka Hindiya, sidoo kale waxa ku hadla dadka ku nool jasiiradda Fiiji, dalka Nepal iyo tiro badan oo ku nool dalka Koonfur Afrika iyo gobolo kale oo adduunka ah gaar ahaan dalalka Asia.
4. Luuqadda Carabiga: Waxa ay noqotay luuqadda Afraad ee adduunka ugu faafitaanka badan. Waxa ku hadla dad ku kala nool in ka badan 66 waddan oo ay ku jiraan dhammaan dalalka jaamacadda carabtu. Carabida waxa ku hadla 6.6% tirada dadka adduunka ku nool waxaana sannadkii 1974-kii loo aqoonsaday luuqadaha rasmiga ah ee Qaramada Midoobay.
5. Luuqadda Spanish-ka: waxa ay noqotay luuqadda shanaad ee ugu faafitaanka badan. Waxa ku hadla luuqaddan 6.2% tirada dadka adduunka ku nool. Waana ku dhawaad 400 oo Malyuun oo qof. Marka laga yimaad dalka Spain waxa luuqaddan lagaga hadlaa dalal badan oo Latin America, iyo badhtamaha Ameerika ku yaalla waana luuqadda labaad ee dalka Maraykanka marka Ingiriisida laga tago.
6. Luuqadda Ruushka: waa luuqad wakhtigan si weyn u faafaysa. Waxa ku hadla in ka badan 3.9% dadka adduunka ku nool, waxaana lagaga hadlaa marka Ruushka laga tago dalal badan oo ka mid ah Jamhuuriyadihii midawgii Soofiyeeti ee hore oo ay ugu horreeyaan Belorussia, Kazakhstan iyo Ukrain.
7. Luuqadda Boortuqiiska: waxa ku hadla 3.2% dadka adduunka ku nool kuwaasi oo ku kala baahsan dalalka Portugal, Macao, Angola, Venezuela, Mozambique iyo dalka Brazil oo ah kan ugu weyn ee ku hadla luuqadda Boortuqiiska.
8. Bengal: Luuqadda Bangaalida ayaa kaalinta 8aad ee luuqadaha ugu faafitaanka badan soo gashay waxaana ku hadla 3.1% tirada dadka adduunka ku nool oo ah in ka badan 120 Malyuun oo qof oo ku kala nool dalalka Bangladesh, Gobolka Bengal ee Hindiya iyo gobolo kale.
9. Luuqadda Faransiiska: Luuqaddan oo ku jirta luuqadaha qaramada Midoobay waxa ay ka mid tahay kuwa adduunka ugu waaweyn ee haddana si weyn u sii kordhaya. 32 waddan ayay luuqaddani u tahay luuqadda rasmiga ah. 3.05% dadka adduunka ayaa ku hadla. Marka laga tago dalka Faransiiska waxa iyana luuqaddooda koowaad ay tahay dalalka Canada, Switzerland, Luxemburg, Imaaradda Monaco iyo dalal badan oo Afrikaan ah oo ay luuqadooda rasmiga ah tahay.
10. Luuqadda Jarmalka: waxa ku hadla 2.7% tirada dadka adduunka. Waxa lagu tilmaamaa luuqad ka mid ah luuqadaha ugu faafitaanka badan Ururka Midawga Yurub. Marka laga tago dalka Jarmalka waxa luuqaddan si weyn loogaga hadlaa dalal ay ku jiraan Austria, qaybo badan oo Switzerland ah, Belgium iyo dalal kale.
Previous PostCalaamadaha Guul-wadeyaasha - Qalinka: Cali Cabdi Coomay Next PostM/ Siilaanyo Oo Si Degdeg Ah U Buuxiyay Booskuu Shalay Iska Casilay Badhasaab Xigeenkii Hore Ee Sanaag Oo Isaga Tagay Dawladda Iyo KULMIYE